साहस उर्जाकाे शेयर आवेदन कसरी दिने ? सूचना सहित - Nepal News Site
नेपालन्यूजसाईट समाचारदाता २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार ११:३२
काठमान्डाै : साहस उर्जा लिमिटेडले शुक्रबार (आज)देखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको स्थानीयबासीहरुलाई प्राथमिक निष्काशन (आइपिओ) जारी गरेकाे छ । कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका दरले ३५ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेकाे जनाएकाे छ ।
कम्पनिका अनुसार छिटाेमा भदौ ११ गते आईपीओ निष्काशन बन्द हुनेछ भने पर्याप्त आवेदन नआएमा भदौ २७ गते सम्म आवेदन मिति लम्बिनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १० लाख ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी हुने शेयर बाँडफाँडपछि दोस्रो चरणमा ७० करोड मुल्यको ७० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा बिक्रीमा आउँने बताइएकाे छ ।
कहाँ कसरी आवेदन दिने ?
ग्लोबल आईएमई बैंक, सल्लेरी सोलुखुम्बु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लुक्ला सोलुखुम्बु, लक्ष्मी बैंक, मुक्ली र नेले शाखा सोलुखुम्बु, माछापुच्छ्रे बैंक, सल्लेरी सोलुखुम्बु, प्राइम कमर्शियल बैंक, रमिते शाखा सोलुखुम्बु बाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ।
सोलुखुम्बुको आयोजना प्रभावित क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण जिल्ला बासीहरुले आइपिओमा आवेदन दिन सक्ने कम्पनिले जनाएकाे छ । आवेदकले स्थानीय बासी प्रमाणित हुने कागजात (नागरिकता) सहित हालसालै खिचेको फोटो सहित आवेदक स्वयम्ले दस्तखत गरेको फारम बुझाउनुपर्नेछ । १६ वर्षभन्दा मुनिका आवेदकको हकमा संरक्षकले जन्मदर्ता सहित आवेदन फारम बुझाउनु पर्नेछ। साथै संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
अन्य जिल्लाबाट सोलुखुम्बु जिल्लामा विवाह भै आएका महिलाहरुको हकमा विवाहदर्ताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । अन्य जिल्लाबाट बसाई सरि आएका आवेदकको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । एक जनाले एउटा मात्र आवेदन दिनुपर्ने छ अन्यथा सबै आवेदन रद्द हुनेछ । रु. ५०,००० भन्दा माथिको रकम बराबरको लगानीकर्ताले Account Payee Cheque मार्फत रकम बुझाउनु पर्नेछ । रु. ५,००,००० वा सो भन्दा बढी रकम बराबरको लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अनिवार्य PAN Number उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
साहस उर्जा कम्पनीले सोलुखुम्बुको सोलु खोलामा ८६ मेगावाटको सोलु खोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यो निजि क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको नेपाल कै ठुलो क्षमताको जलविद्युत योजना हो । आईपिओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुंजी साढे ३ अर्ब पुग्ने छ ।
विद्यमान नियम अनुसार स्थानीयलाई बाँडफाँड भएको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३ वर्षसम्म बेच्न पाइदैन ।
सूचना हेर्न यहाँ थिच्नुहाेस्